Service Admin Assistant | Royal Ayeyarwaddy co. ltd ﻿
28.9.2019, Full time , Retail / Wholesale
Company: Royal Ayeyarwaddy co. ltd
•	Service ဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	နေ့စဉ် Dealer ဆိုင်များမှ Warranty စက်များကို စနစ်တကျလက်ခံတတ်ရမည်။
•	Customer Complain များကို ရှင်းပြတတ်ရမည်။
•	Computer (Microsoft Office and E mail) ကောင်းမွန်စွာသုံးတတ်ရမည်။
•	English4skills (Basic) ရှိရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၆) လ ရှိရမည်။
Work location No7(G/F), 87th Street, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
153 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Service ဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	စကားပြောချိုသာရမည်။ •	နေ့စဉ် Dealer ဆိုင်များမှ Warranty စက်များကို စနစ်တကျလက်ခံတတ်ရမည်။ •	စာရင်းပြုစုတတ်ရမည်။ •	ထိန်းသိမ်းတတ်ရမည်။ •	Customer Complai ...
•	Store, Account, Finance ပိုင်းတို့တွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	သင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ •	လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင် အသင်းအဖွဲ့အတွင်း ပေါင်းသင်းဆက်� ...
•	Customer အလိုရှိသော ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းသော IT Product များကို တပ်ဆင်ရှင်းပြနိုင်ရမည်။ •	Service ဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်သော အဖွဲ့ဝင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရမည်။ •	Customer များနှင့် မိမိ၏အသင်းအဖွဲ့အ ...
•	English4Skill (Prefer to Reading & Writing) •	Prefer to have Graphic Design Course Diploma (or) Certificate ! •	Must have strong knowledge of Photoshop, Illustrator (AI) and other design software ! •	Skillful in create designs (advertisement, promotion, social media posts, vinyl, poster…..ect.)! •	Must be strong attention to details and able to meet deadlines!
•	Prefer to have Graphic Design Course Diploma (or) Certificate ! •	Must have strong knowledge of Photoshop, Illustrator (AI) and other design software ! •	At least2years working experience in related field (prefer in ICT Industry)! •	Must be experience in content writing, digital marketing, social page administration! •	Skillful in create designs (advertisement, promotion, social media posts, vinyl, poster…..ect.)!
DigitalService Admin Assistant Marketing Designer Admin, Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Royal Ayeyarwaddy co. ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Retail / Wholesale Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Jr Project Supervisor